Ukubanjwa Inja, Ukwehliswa Okomile, Ukukhwehlela nokubamba kabusha: Okufanele Ukwazi - Ezempilo
Ukubanjwa Inja, Ukwehliswa Okomile, Ukukhwehlela nokubamba kabusha: Okufanele Ukwazi
Inja ebamba umlomo ingenza umsindo ongakholeki, kufana nokuthi inja yakho izama ukugabha kodwa akuphumi lutho.
Kwesinye isikhathi izinja ziyakwazi ukukhala noma ukukhwehlela njengoba bezama ukusula umphimbo wazo ngemfucumfucu noma amafinyila nangezinye izikhathi kungabangelwa ukugula.
Amanye amacala okuvalelwa kwezinja, ukugoba noma ukoma kabusha akuyona into okufanele ukhathazeke ngayo . Kuyafana nabantu, lapho sigwinye ngendlela engafanele.
Kepha kunezikhathi lapho lokhu kuziphatha kuyisibonakaliso sokugula noma okuthile okukhathazayo.
Ukuphendula umbuzo wokuthi kungani izinja ziganga, nansi ukubuka kwethu konke ukuthi iyini inja ebambekayo, izimpawu ezijwayelekile, izimbangela nokuthi ungayimisa kanjani.
Inja ukuGagging, Heaving futhi Retching
Kungani Izinja Gag?
Kuyini ukuGagging Ezinja?
Ungayimisa Kanjani Inja Ibambekile
Kungani Izinja Zidotshwa?
Kuyini Ukuphinda Izinja?
Ungayimisa Kanjani Ukufuya Inja
Ukugoqana, ukukhwehlela, ukusika nokuqamba kabusha - Uyini umehluko?
Inja iyavala umlomo
Izimpawu Ukuvulwa komlomo; ukuqhuma komphimbo kwenza ukuphefumula noma ukugwinya kube nzima. Ukuhlanza okungakhiqizi Ukuguqula isenzo sesisu nesomlomo
Izimbangela Ukuvuvukala kweLarynx, iKennel Cough noma ukutheleleka Ukuzizwa ucanuzelelwa inhliziyo, Ukudla utshani, iPerge Pang, Bronchitis noma i-Irritation evela emzimbeni wangaphandle Ukuzizwa ucanuzelelwa inhliziyo, Ukudla utshani, Indlala Pang
Inja iyavala umlomo ukuqhuma komphimbo lokho kwenza ukugwinya noma ukuphefumula kube nzima enja yakho.
Imvamisa kwenzeka ngqo ngaphambi noma ngemuva kokukhwehlela: kufana nenja yakho ezama ukuphalaza nokukhwehlela ngasikhathi sinye; kodwa-ke, ngokungafani nokuhlanza, akuphumi lutho.
Uma ukhathazekile ngenja yakho nge-gag ephindaphindayo, khona-ke qaphela ukuthi ngabe i-gag iza ngaphambi noma ngemuva kokukhwehlela (lokhu kuzosiza kakhulu i-vet yakho).
Ukuxinwa kwezinja kuvame ukubangelwa ukuvuvukala komphimbo . Njengengxenye uhlelo lokuphefumula , umphimbo waziwa nangokuthi ibhokisi lezwi.
Enjeni enempilo, umphimbo uvula ukuze umoya ungene emaphashini bese uvala ngesikhathi sokudla umise ukudla namanzi angena esifubeni.
Izinja ezinesifo kaningi ziba nokuvuvukala komphimbo okubangelwa ukutheleleka noma ukucasuka okungadala ukuvaleka kwenja.
Njengoba sixoxile ngenhla, ukubamba inja kubangelwa ukuvuvukala noma ukucasuka komphimbo.
Izimbangela ezivamile zokucasuka ngokuvamile zifaka:
Izinto Zangaphandle (mhlawumbe ngenxa yomzimba wangaphandle ofakiwe noma ukuhlukumezeka okubangelwe elinye izwe)
Uma inja yakho idla ukuhlafuna okuqinile khona-ke nalokhu kungaba nezimbangela zokucasuka uma zingazishayisanga ngokwanele
Ezinye izinhlobo zezinja nazo ithambekele ekuthuthukiseni ukukhubazeka kwe-laryngeal okusho ukuthi umphimbo awusavali kahle.
Lokhu kusho ukuthi amanzi nokudla kungangena ku-airway futhi kuzobangela ukuthi inja yakho ikwazi ukuyisula.
Izinhlobo ezitholakala kakhulu ekukhubazekeni komlomo zifaka phakathi: iLabrador Retrievers, iGolden Retrievers, amaWeimaraners, Izinja Zasezintabeni ZaseBernese namaDanes amakhulu.
Esinye isizathu sokubamba umlomo ezinjeni izifo.
Ukutheleleka okuvame kakhulu yilokho okungenzeka ukuthi uke wakuzwa ... UKennel Cough .
Lokhu ukutheleleka okusakazeka kalula lapho izinja zihlangana (isb. Ukuhamba, ukunakekelwa kwezinsuku noma imibukiso).
Ukukhwehlela kweKennel kubangelwa uhla lwamabhaktheriya negciwane elinezimpawu zokwelashwa ezikhulayo Izinsuku eziyi-3-4 ngemuva kokuthintana nenja enegciwane .
Izimpawu zeKennel Cough zifaka:
Ezimweni ezibucayi izinja zingaba yindlala, zihlaselwe ngumkhuhlane futhi zidlulele ekuthini kube nenyumoniya
Ukuphathwa kuyisihluthulelo, ngakho-ke uma inja yakho ivaleka imilomo ngenxa yokutheleleka, gcina inja yakho enegciwane ikude nezinye izinja .
Ngaphandle kokuthi kube nokutheleleka okunzima okungadinga ama-antibiotic, izinja eziningi zilulama kahle ngaphandle kokunakwa kudokotela wezilwane.
Njengenjwayelo, inja enempilo ikulungele kangcono ukulwa nokutheleleka, ngakho-ke gxila ekuhlangabezaneni nezidingo zabo zokudla okunempilo nokuzivocavoca futhi ubanikeze amathuba okuphumula nokululama.
Kuyafaneleka futhi ukucatshangelwa ukuthi izinhlobo ze-brachycephalic zithambekele kakhulu ekutholeni izifo zokuphefumula ngenxa yamakhala abo amancane, i-trachea nezicubu zomlomo ezijiyile.
Uma inja ibambeka iba yinto ejwayelekile nenja yakho, pop ukubona i-vet yakho ukuze uhlolwe ngokuqhubekayo.
Ukuphinda kutholakale i- ukuhlehlisa ukunyakaza kwesisu nomphimbo ngaphandle kokuphalaza.
Kubangelwa “ukuzizwa unesicanucanu.”
Abantu bangakwazi ukuphinda benze i-rech, futhi kungenzeka ukuthi uziqaphele ngokwakho lapho unuka into ongayithandi (isb. Inja yezinja noma ingane egulayo)!
Uzobona ukuqhuma noma ukoma okwomile uma inja yakho idla utshani njalo .
Njengoba bezama ukubuyisa bonke lobo tshani, bazomisa i-heave ne-retch.
Nawe unga qaphela lokhu kuziphatha ngesikhathi sendlala - kanjalo lapho inja yakho yomile ifuduka, ekugcineni baletha inyongo encane .
Lokhu akuyona into okufanele ukhathazeke ngayo, inkinga ukuthi lapho inja yakho yomile iphakamisa noma iphinda futhi iba njalo.
Izimbangela ezivame kakhulu kufaka phakathi ukuthinta inja zifaka:
Ukuvezwa isikhathi eside ezintweni ezicasulayo (isib. Intuthu kagwayi)
Bloat, noma i-gastic torsion
Ukungenisa into enobuthi
Isifo esijwayeleke kakhulu esidala ukuphindwa kwezinja yi-bronchitis engapheli esaziwa nangokuthi isifo esingelapheki sokuvimbela kwamaphaphu.
Yilapho i-bronchi emaphashini enja yakho ivuvuka khona. Kuholela ekukhwehleleni okungapheli, okungabonisa njenge-hack eyomile noma umsindo ophindayo (njengokukhwehlela komuntu obhemayo kubantu).
Kuvame kakhulu ezinhlotsheni ezincane noma zamathoyizi kepha kungenzeka nasezinhlotsheni ezinkulu futhi.
UKennel Cough futhi angaba yisizathu sokubamba kwakho inja, noma ukoma okumile. Kodwa-ke, kulokhu, uzobona amagwebu amhlophe emlonyeni wabo.
Enye imbangela ebucayi yokuphakama okomile ezinjeni ngama-hairballs !
Okuphathelene nalokho ukuthi ukuphuma noma ukubamba kabusha okomile kuvela ezinhlwini eziningi zezimpawu zezinja.
Inkambo ehamba phambili yokwenza ukuthi ngabe ngabe yinto eyenzeka kanye noma iyaqhubeka.
Uma kuqhubeka, bheka ezinye izimpawu zokuhlonza ukugula okungenzeka.
Cabanga ukuthi ngabe inja yakho ibingahle ihlwithe noma ivezwe okucasulayo. Uma ukhathazekile, nikeza udokotela wezilwane wakho ukweluleka ngezinyathelo ezilandelayo.
Kungani Izinja Zoma Ukuphakama?
Ukwehliswa nokomiswa kabusha okomile kuyafana kobuchwepheshe, kuvame ukwenziwa ekuphenduleni kokufuna ukuhlanza (isb.Inja yakho izizwa inesicanucanu).
Ukuxinwa kwezinja kuvame ukubhangqwa nokukhwehlela (okungase kufike ngaphambi noma ngemuva kokukhwehlela). Lokhu kubalulekile ukuqaphela i-vet yakho.
Inja yakho izovula kakhulu umlomo wayo; kungukuqubuka komphimbo okwenza ukuphefumula nokugwinya kube nzima kakhulu.
Ukwehliswa nokomiswa okwomile kucishe kushintshane, kungukuhamba okuphambene kwesisu nomphimbo ngaphandle kokuhlanza ( njengomsindo wokugenca ).
Isizathu esivamile sokubamba izinja, ukusikhipha noma ukusiphinda ukukhwehlela kennel .
Izimbangela ezinamandla kakhulu zokususa noma zokuthinta kabusha ukucasulwa okuvela emzimbeni wangaphandle - kungaba ukudla okungenakuphikiswa, amatshe, izinti, amagxolo, amathoyizi, amakhrayoni, izinhlamvu zemali ... uhlu lude!
Uma ucabanga ukuthi inja yakho inomzimba wangaphandle odala ukucasuka, kungcono ukukhuluma nodokotela wezilwane.
Kunezizathu eziningi zokubamba inja, ukumisa okomileyo nokuthinta kabusha, okuvame kakhulu ukukhwehlela kennel (izimpawu zingabonakala ezigulini ezahlukahlukene) nokucasuka okuvela ezintweni zangaphandle.
Izimbangela eziningi lapho zodwa zinobungozi; okusho ukuthi, abakhathazeki ngalutho.
Inkinga yilapho i-gag yenja yakho iba njalo futhi ingaguquguquki, noma ihlanganiswe nezinye izimpawu.
Njengenjwayelo, uma ukhathazekile ngenja yakho, khona-ke funa iseluleko sochwepheshe.
I-Brindle Pitbull (Umhlahlandlela Wabanikazi Abasha Kule Nja Enemigqa Ye-Tiger)
umalusi waseJalimane uzala nempisi
umalusi waseJalimane ukukhwelana nempisi
amabala amantombazane aluhlaza okwesibhakabhaka
ukufaka ihhanisi lezinja lezinja ezincane
ilebhu exutshwe ne-pitbull